အဘယ်အရာကိုပစ္စည်းများကိုအကောက်ခွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ရှောက်သွားရန်လိုအပ်လဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဆိုပါအကောက်ခွန်မဝင်ခင်ကရုရှားဘာသာစကား, လူမှုရေးဘာသာရပ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးယူရန်လိုအပ်သောခဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆို၏ပုံစံအတွက်စာမေးပွဲယူပြီးသောအခါမူကားထက်ပိုမကြာသေးမီက, တက္ကသိုလ်အများစုလိုအပ်: ရုရှဘာသာစကား, လူမှုရေးဘာသာရပ်နှင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကား။
နိုင်ငံခြားဘာသာစကား, ရုရှဘာသာစကားနဲ့စာပေ (ဖွဲ့စည်းမှု), သမိုင်း (လူမှုရေးသိပ္ပံ) နှင့်သင်္ချာ: အကောက်ခွန်ဌာနမှရိုက်ထည့်ရန်အောက်ပါဝင်ပေါက်စာမေးပွဲများ၏လျှောက်ထားသူတင်သွင်းခဲ့တဲ့အနေဖြင့်လိုအပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတက္ကသိုလ်များအတွက်ပစ္စည်းများကွဲပြားလိမ့်မည်။ အခုတော့စာမေးပွဲရလဒ်များကိုရေတွက်။
“ အကောက်ခွန်” ဌာန၌ပညာသင်နိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါဘာသာရပ်များအတွက်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကိုဖြေဆိုရမည် - လူမှုရေး၊ ရုရှားဘာသာ (စာစီစာကုံး) နှင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကား။ လျှောက်ထားသူကိုစာမေးပွဲရလဒ်အရစာရင်းသွင်းနိုင်သည်
အခုတော့ရုရှားတက္ကသိုလ်များအတွက်စာရင်းသွင်းသည့်စုစည်း gos.ekzamena ၏အခြေခံပေါ်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကတက္ကသိုလ်ရုရှား, အင်္ဂလိပ်အတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့်လူမှုရေးလေ့လာမှုများ pass လိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားလူမှုရေးသိပ္ပံသမိုင်း၏, သူ့အထက်တန်းကျောင်းကိုလည်းသင်ယူပါ။
ဒါကြောင့်အထူးအိပ်မက် Quote အပေါ်အလားအလာကျောင်းသားများကိုလေ့ကျင့်ရေးတို့တွင်အဒါခေတ်စားသည်အဘယ်ကြောင့်ငါမသိရပါဘူး, အကောက်ခွန် deloquot;? ဝေးလွယ်ကူပါတယ်, ပေမယ့်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ Serial ထိုသို့သောတစ်ဦးအေးမြ-preklasssnaya ထံမှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်။ သို့သော်ပုံ, ထိုယောက်ျားတွေဒီအလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့မိမိတို့အကြောင်းပြချက်။ သငျသညျအကောက်ခွန်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်လျှင်, စာမေးပွဲဖြေဆိုလူမှုလေ့လာမှုများ, သင်္ချာနှင့်ရုရှားဘာသာစကား၏အမြင့်ဆုံးကိုပွငျဆငျ။ ခန့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကိုမေ့လျော့မပေးသင့်ပါဘူး။
အမြင့်ဆုံးသောကျောင်းများအတွက်, အထူး quote; ထုံးစံ deloquot; သငျသညျရုရှားဘာသာစကားနှင့်လူမှုရေးဘာသာရပ်ကဲ့သို့သောဘာသာရပ်များအပေါ်စာမေးပွဲရလဒ်များကိုများကိုသေချာဖြစ်ရမည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကား, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ပထဝီ: အပိုဆောင်းပစ္စည်းများကိုအဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏အထူးပြုပေါ်မူတည်သည်။
တစ်ဦးအထူးကုဒ် 38.05.02 Quote လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာယူရန်လိုအပ်ကြောင်းပစ္စည်းများစာရင်း; အကောက်ခွန် deloquot; တက္ကသိုလ်ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မည်။
အကောက်ခွန် deloquot; ဒီမှာစာမေးပွဲများ၏ရလဒ်များသည်တစ်ဦး Quote လျှောက်ထားသည့်အခါလိုအပ်မည်အကြောင်းဟူမူကား,
ပညတ်တရား၏မော်စကို Institute မှဝင်ရောက်သည့်အခါဥပမာ, သငျသညျကိုအောက်ပါဘာသာရပ်များအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆို၏ရလဒ်များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်:
အဆိုပါအကောက်ခွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ရောက်သည့်အခါဤတွင်ဥပမာ, Bauman စာမေးပွဲရလဒ်များကိုလိုအပ်:
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည်သင်စိတ်ဝင်စားသောတက္ကသိုလ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့သွားရန်နှင့်မည်သည့်ဘာသာရပ်များလိုအပ်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်ဘာသာရပ်များ၏စာရင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်နွေ ဦး ပေါက်ခါနီးပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယဝမ်းကွဲပဲ PTA မှာလေ့လာခဲ့တယ်။ အချိန်ပြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းရသလဲ၊ သင်မည်သည့်ဘာသာရပ်များသင်ကြားရန်လိုအပ်သည်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းပုံစံရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးရှိပြီးသားလျှောက်ထားသူများလည်းရှိသည်။ အချိန်ပြည့်၊ အချိန်ပိုင်းနှင့်အချိန်ပိုင်းပညာရေးရှိသည်။ အသုံးအများဆုံးလေ့ကျင့်နည်းကိုယူကြပါစို့ - အချိန်ပြည့်နှင့်သာမန်ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်ကျောင်းပြီးပြီးနောက်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကျောင်းပြီးပြီးနောက်အချိန်ပြည့်လေ့လာမှုများ၊ Quote ရန်, အကောက်ခွန် deloquot; ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုယူရန်လိုအပ်ပါတယ်
အကောက်ခွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရုရှားအကောက်ခွန်အကယ်ဒမီတွင် (သို့) အချို့သောတက္ကသိုလ်များ၏ဘဏ္,ာရေး၊ ဥပဒေရေးရာ၊ စီးပွားရေးစွမ်းရည်များ၌သင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျောင်းသားသည်အရည်အချင်းရှိသောအကောက်ခွန်၊ အကောက်ခွန်၊ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများ - စာမေးပွဲ၏ရလာဒ်များသို့မဟုတ်လူမှုရေးလေ့လာမှုများ၊ ရုရှားနှင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကိုစစ်ဆေးသည်။
20 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,458 စက္ကန့်ကျော် Generate ။